SAWIRRO: Madaxweyne Waare oo tababar u furay ciidamo ka mid noqonaya Booliska Hirshabelle – Kismaayo24 News Agency
by admin 5th December 2019 0148
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta tababar u furay in ka badan 200 askari oo ka mid noqonaya ciidanka booliska Hirshabelle, kaasi oo lagu qabtay dugsiga tababarka Boliiska.Hirshabelle ee Magaalada Jowhar, waxaana ciidamadani ay noqonayaan dufcadii sedexaad ee Ciidanka Boliiska Hirshabelle.
Munaasabadda furitaanka tababarka waxaa ka qeyb galay Gudoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle iyo labadiisa ku xigeen, Xubno ka tirsan labada gole ee dowladda Hirshabelle, saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Hirshabelle, AMISOM, iyo marti sharaf kale oo munaasabadda lagu casuumay.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle Sh Cismaan Barre oo hadal kooban ka jeediyay munaasabadda ayaa ku dheeraaday ka sheekeynta ahmiyada ciidankani uu u leeyahay Hirshabelle iyo sida lagama maarmaanka ay u tahay in ay u qidmeeyaan bulshada ay ciidanka u noqonayaan, waxaana uu kula dar daarmay in si wanaagsan ay ula dhaqmaan shacabka oo ay noqdaan kuwa lagu soo hirto.
Ciidamadan Tababarka Madaxweyne Waare uu u furay ayaa noqonayaa dufcadii sedexaad ee Ciidanka Boliika Hirshabelle waxaana tababarka ay qaadanayaan uu yahay mid casri ah oo wax badan ku soo kordhin doona aqoontooda ciidanimo.
DEGDEG: Kooxo hubeysan oo toogasho ka geystay Magaalada Muqdisho.
Dhagayso:- Gen saacid oo sheegay in Ay Adkeynayaan Sugida Amaanka Muqdisho
DAAWO SAWIRRO – Masaajid ku yaal Sacuudi Careebiya oo weerar Bamba ah lala beegsadey